AH: အတု… အတု… အတု
အတု… အတု… အတု
အတု အကုန်လုံး တရုတ်တွင်ရသည်။ သို့သော် အစားအသောက်ကို အတုလုပ်တာကတော့ အတော့်ကိုဆိုးလှသည်။ တရုတ်မှာ နွားနို့ မသောက်ရဲ။ ခက်သည်က မသောက်လျှင် ငတ်မည်သာတည်း။ ထို့ကြောင့် သောက်ချင်လာလျှင်တော့ တစ်ခွက်တစ်လေ မှာသောက်ဖြစ်သည်။
၀က်နားရွက်လည်း အတုထွက်သည်။ အရိုးနှင့် အရေခွံတွေကို ရောကျိုလို့ရလာတဲ့ ဂျယ်လီလို ပျစ်ပျစ်အရည်နှင့် ပလပ်စတစ်ကို ရောသမပြီးတော့ ဘယ်လိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်သည်မသိ။ ၀က်နားရွက်အတိုင်း ထွက်လာလေသတည်း။ စားလျှင် သွေးနှင့် နှလုံးရောဂါတွေရနိုင်သည်တဲ့။ အနံနဲ့တော့ ခွဲလို့ရနိုင်သည်။ ၀က်နားရွက်မစားခင် အနံရှုကြည့်ရမလိုလို။
ကြက်ဥ အတုကတော့ ကြာလှပြီကော။ အတု အစစ် ဘယ်လိုခွဲမတုန်း။ မနက်စာ ပေါင်မုန့်နှင့် ကြက်ဥကိုသာ ဟိုတယ်တွင်ရှိသည်။ ကြော်ပြီးသာ ကြက်ဥတစ်လုံးကို အတုအစစ်မခွဲနိုင်။ ဒီတိုင်းသာ စားရသည်။ ကြက်ဥတင်မဟုတ် စပျစ်သီးပါ အတုထွက်နေပြီ။ YouTube တွင် ရှု့ကြပါကုန်။
ဂေါ်ဖီထုတ်လည်း အတုထွက်သည်။ ထွက်တော့လဲ ထွက်ပေါ့။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က အသားထဲရောချင်ရော၊ မရောချင်လဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကြော် မှာစား၊ ဒီလိုနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က ကင်းလို့ ရတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒီတော့ သရဏဂုံ ရွတ်ပြီး စားဖို့သာရှိသည်။ ဂေါ်ဖီထုတ် အတုကတော့ အောက်က YouTube Link မှာ ကြည့်နိုင်သည်။ လောလောဆယ်တော့ အတုများနှင့် သံသရာ လည်လိုက်ဦးမည်။ ခုလည်း ကိုယ်ဆောက်နေတဲ့ သင်္ဘောကို အတုလား၊ အစစ်လား ခွဲဖို့မလွယ်တော့… သုံးတဲ့ Material တွေရဲ့ အရည်အသွေးကို welding ချောင်း တစ်ချောင်းချင်းစီလိုက်မစစ်နိုင်၊ heat treatment ပေးရမယ့်နေရာတွေ ပေးမပေး ညလုံးပေါက် ထိုင်မကြည့်နိုင်၊ pipe တစ်လုံးချင်းစီရဲ့ အရည်အသွေးကို လိုက်မကြည့်နိုင်။ မိုးနတ်မင်းကြီးကူပါဦး……
Posted by AH at 9/29/2012 09:30:00 PM
mstint September 30, 2012 at 9:58 AM
ဘုရား ဘုရား ကြောက်စရာတွေပါလား မောင်အောင်ထွဋ်ရေ လူပေါင်းများစွာ ဒုက္ခရောက်စေမည့် အစားအသောက် အတုထုတ်တာတော့ မဖြစ်သင့်ပေမယ့် စီးပွားရေးတစ်ခုသာမြင်ပြီး လောဘဇောတက်နေတဲ့ မသမာသူတို့ကြောင့် မောင်အောင်ထွဋ်ပြောသလို သရဏဂုံတင်ပြီးမှ စားတဲ့ နည်းလမ်းမှတစ်ပါး အခြားမရှိပြီ။
Anonymous September 30, 2012 at 1:14 PM
လွန်တယ်တော့ဒီတလုတ်တွေ ကိုယ်လည်းတလုတ်ဘဲ ပဲာပဲာ
လေပြေချို September 30, 2012 at 3:26 PM
ကြက်ဥနဲ့ အသားငါးတွေပဲ အတုထွက်တာကြားဖူးတာ.. အခုတော့ အသီးအရွက်ပါ အတုထွက်တယ်ဆိုတော့ ကြောက်ဖို့ကောင်းနေပြီးနော်.. ဟုတ်ပါ့ တီတင့်ရေ.. သူပြောသလိုပဲ သရဏဂုံတင်ပြီးမှ စားတဲ့ နည်းလမ်းမှတစ်ပါး အခြားမရှိပြီပေါ့...:((
ညိမ်းနိုင် September 30, 2012 at 7:54 PM
အိုင်ဆေး ဆားပုလင်းကိုအွတ်ထောင်....ဒီအတိုင်းဆို တီလုပ်ပြည်မှာ ဆားပုလင်းတစ်ယောက်ကြာကြာနေရင်ဖြင့် ဒွတ်ခနဲ့လှလှ
လရိပ်အိမ် September 30, 2012 at 8:00 PM
Iora October 16, 2012 at 2:10 PM
dadaoo October 24, 2012 at 6:01 PM
FAKE WOMAN SHOULD EXPORT TO CHINA FROM BURMA.
Unknown February 8, 2013 at 10:42 PM
iPhone5လား တရားစွဲပစ်လိုက်မယ်
မီးမုန်တိုင်း (သို့) Fire Whirl များ
ကျွန်တော်နှင့် C သုံးလုံး ဒုက္ခများ
ဂူဂဲလ်ရဲ့ ဂူဂဲလ် မျက်မှန်
အိုင်… အိုင်… အိုင်….
ကြက်ဥနီနီ၊ ချောကလက် နှင့် ဂျင်း
ယုံချင်ယုံ မယုံချင်နေ ရှန်ဟိုင်း ဖုန်းရွှေပုံပြင်မျ...
ချစ်သဲ surprise ဖြစ်အောင်အလုပ်ကောင်းတာ ကံကောင်းလို...
99Counters new embed code
ငါးတစ်ကောင်ကို ယွမ် ၃သန်းနဲ့ ပွပေါက်တိုးသွားတဲ့ တံ...
ဘ၀ကို အရှုံးမပေး၊ လက်နှစ်ဖက်မရှိတဲ့ ပန်းချီပညာရှင်
Lamborghini ပြိုင်ကားကို ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့ ကိုတရုတ်
စင်ကာပူရဲ့ Lemon Law (သို့) သံပရာသီး ဥပဒေ
အကောင်ကြီးကြီး အမြီးရှည်ရှည်ဆိုတာ ကြားဖူးမှာပေါ့။ အမြီးရှည်လို့ အကောင်ကြီးတာလား၊ အကောင်ကြီးလာလို့ အမြီးတွေရှည်လာတာလားတော့ ...
Variety Shows of 2022….. - 2022 မှာ နိုငျငံအတျောမြားမြား ကိုးဗဈရောဂါတှေ ပါးကသြှားတော့ လုပျစရာရှိတာလုပျ ပွနျထူထောငျစရာ ရှိတာထူထောငျ လုပျနကြေ ပွိုငျပှဲတှေ ဆုပေးပှဲတှေ ပွနျကငျြးပတဲ...
19June2022 - အသကျရှုဝမလားလို့ အပွငျခဏထှကျမိတယျ... စိတျထဲ မသကျမသာ ခံစားရတယျ... ပွုံးတိုငျးလညျး ​ပြျော​နလေို့မှ မဟုတျတာ၊ ပထမပုံက OOTD​ပေါ့ ဒုတိယပုံက Barကအပွနျ...၊ ​အ...